के स्टेफेन हकिंग्सले भनेजस्तै पृथ्वी अबको छ सय वर्षमा आगोको लप्कोजस्तै बलिरहेको हुनेछ ? - IAUA
information technology बैज्ञानीक तथ्य
ramkrishna January 3, 2018	के स्टेफेन हकिंग्सले भनेजस्तै पृथ्वी अबको छ सय वर्षमा आगोको लप्कोजस्तै बलिरहेको हुनेछ ?
एआईलाई लिएर चिन्ता गर्नेमा स्पेस एक्स अन्तरिक्ष कम्पनीका एलेन मस्क समेत रहेका छन् । यद्यपि माइक्रोसफ्टका सहसंस्थापक बिल गेट्स भने यस्ता कुरालाई तत्काल चिन्ता गरिहाल्नुपर्ने ठान्दैनन् । हकिंग्सले आगामी सम्भावित चुनौतीहरुका लागि मानव समुदाय तम्तयार हुनुपर्ने आवश्यक ठान्छन् । उनी यो र अर्को पुस्तालाई सुरुवाती जीवनमा विज्ञानको खोजी र अध्ययनमा व्यस्त राख्न सुझाउँछन् ।kharibot
Previous Previous post: रक्सी खाएपछि नेपालीहरू किन अंग्रेजी बोल्छन्, वैज्ञानिक व्याख्या
Next Next post: कसरी पाक्छ प्लाष्टिकको चामल